.မြန်မာ့လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရရှိဖို့ ဗြိတိန်က ကူညီပေးမည်. – Thukhuma
.မြန်မာ့လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရရှိဖို့ ဗြိတိန်က ကူညီပေးမည်.
မြန်မာ့လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရရှိဖို့ ဗြိတိန်က ကူညီပေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရရှိရန် ဗြိတိန်က ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များမှ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ မတည်ကူညီကာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး လိုအပ်နေသည့် နိုင်ငံများကို ကာကွယ်ဆေးရရှိရန် ကူညီမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံရုံးက “မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အကူအညီ လိုအပ်နေသောနိုင်ငံများ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ယူကေနိုင်ငံက ၄င်းအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များထံမှ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကို မတည် ကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေအနက် အကူအညီ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသော သူတို့အတွက် ကာကွယ်ဆေးများရရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူအားလုံး ကာကွယ်ဆေးရရှိရေးအတွက် ယူကေက ဆက်လက် ပံ့ပိုးကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။” လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ျမန္မာ့လူဦးေရ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ရရွိဖို႔ ၿဗိတိန္က ကူညီေပးမည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးရရွိရန္ ၿဗိတိန္က ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။
ယူေကႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ားမွ ရန္ပုံေငြ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ မတည္ကူညီကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး လိုအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးရရွိရန္ ကူညီမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ုံးက “ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အကူအညီ လိုအပ္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ယူေကႏိုင္ငံက ၄င္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံကို မတည္ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရအနက္ အကူအညီ အလိုအပ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ သူတို႔အတြက္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူအားလုံး ကာကြယ္ေဆးရရွိေရးအတြက္ ယူေကက ဆက္လက္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။